Wakiilka Jamciyadda Quruumaha ka dhaxeysa ee arrimaha Soomaaliya Axmed wald Cabdalla ayaa mar kale ku celiyay xadgudubka lagu hayo xeebaha dalka Soomaaliya.
Wald cabdalla wuxuu sheegay in xeebaha Soomaaliya laga dhigtay meel lagu daadiyo haraadiga sunta iyo warshadaha, wuxuu kaloosheegay inxeebaha Soomaaliya si ba’an loo guranayo kalluunka iyadoo aan sharci loo haysan.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya Axmed Wald Cabdalla ayaa sheegay in arrintaasi ay niyad jab iyo burbur u tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda.
Wald Cabdalla wuxuu sheegay inuu xiriir la sameeyay isla markaana uu ka codsaday dhowr ururo caalami ah iyo kuwo aan dowli lahayn oo ay ku jirto hay’ada Global Witness oo ka shaqeysa soo bandhigida si khaldan uga faa’iideysiga kheyraadka, iska horimaadyada, musukhmaasuqa iyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhan, inay ka hadasho xad gudubka lagu hayo xeebaha Soomaaliya.
Wald Cabdalla wuxuu sheegay in kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka taagan xeebaha Soomaaliya ay ku lug leeyihiin mas’uuliyiin Soomaaliyeed, iyo qabqablayaal dagaal kuwaasoo lacago lagu siiyo si ay usii huriyaan qalalaasaha dalka.